Ezigbo mmezi, ụgbọ ala ahụ ga-ebi ogologo oge-News Center-NINGBO SUNSOUL AUTO ACCESSORIES CO., LTD
Andkpụrụ na Iwu
Ngwaọrụ Ikuku, Hoses & Ngwa
Ihe nkedo, Chemicals String Chemicals
Ọrụ Taya na Wheel
Ezigbo mmezi, ụgbọ ala ahụ ga-adị ogologo ndụ
Oge: 2020-08-27 Hits: 19
Ekwesịrị idobe ya mgbe ụgbọ ala karịrị akarị. Ndị na-esonụ bụ ụfọdụ ụzọ maka ntụnye naanị.
Nke mbụ. Nlekọta ụgbọ ala gụnyere mmezi nke ime na mpụga
Mpụga mmezi: -ezo aka mgbochi ịka nká mmezi nke ụgbọ ala elu na ụgbọ ala ahụ agba imecha, dị ka mkpuchi nke ụgbọ ala elu, ụgbọ ala polishing na ịme waksị, wdg
Mmezi nke ụlọ: na-ezo aka n'ime ime ụgbọ ala ahụ, dị ka disinfection na nwoke ịga ụlọ ọrụ nke ime ụlọ, ihicha injin, nhicha nke ikuku ikuku, ịgbanwe mmanụ injin, mmiri ụgbọ ala, wdg.
Ihe mmezi kwa ụbọchị gụnyere:
Gbanwe mmanụ ọ bụla 5000 kilomita.
Dochie gasoline nha ọ bụla kilomita 25,000.
Gbanwee eriri igwe ọkụ na kilomita 25,000 ọ bụla.
Dochie breeki breeki ọ bụla kilomita 40,000.
A na-edochi nzacha ntụ oyi kwa afọ.
Dochie batrị kwa abụọ na atọ.
Ekwesịrị inyocha ihe mgbochi bọs ụgbọala ọ bụla kilomita 50,000.
Nke abụọ. Car mmezi mmezi:
Mmezi n'ime ụgbọ ala bụ ime ka ụgbọ ala bụrụ nwata ruo mgbe ebighi ebi. Ebumnuche nke mmezi n'ime ụgbọ ala ahụ bụ imezi ụgbọ ala ahụ ọtụtụ narị puku kilomita na-enweghị ndozi na iji hụ na ụgbọ ala ahụ nọ n'ọnọdụ kachasị mma. Igodo ahụ gụnyere: sistemụ ikuku, mmanụ gas na mmanụ sel sistemụ, sistemụ friji, sistemu breeki, carburetor (injector oil) mmezi, wdg.
1. Hichaa oche
2. Hichaa blanket
3. Debe bọọdụ ụgbọ ala ahụ
4. Ihe mmezi: Ozugbo ịgba nhicha ọmụmụ na butadiene plastic chemical fiber; wee jiri ákwà hichaa ya. N'ikpeazụ, echefula ịgba ihe nkedo nke ihe mkpuchi na-echebe roba na-egbochi iji gbochie ya ịmalite ịmalite ngwa ngwa, na-adịwanye njọ ma sie ike.
5. interiorgbọ ala na nhicha ụgbọ ala: Dịka usoro atọ nke iwepụ ájá, nhicha na ndozi, ụgbọ ala ụgbọ ala, elu ụlọ, ikpo okwu ọrụ azụ, oche, velvet ala na etiti ọnụ ụzọ dị ọcha ma debe ya n'akụkụ niile.
Atọ. mmezi n'èzí ụgbọ ala:
1. Mmezi nke ọkụ ọkụ: Ndozi ngwa ngwa nke ọkụ ọkụ mpụga dị ezigbo mkpa maka ndị ọkwọ ụgbọ ala, n'ihi na ọ bụghị naanị na-etinye nkasi obi nke ịnya ụgbọ ala n'ihe ize ndụ, kamakwa ọ na-etinye ihe nchekwa nchekwa nke ịnya ụgbọ ala n'ihe ize ndụ ozugbo.
2. Mpụga agba mmezi: automotive agba bụ n'ozuzu ịgba agba.
3. Nlekọta taya: Lelee nrụgide taya kwa ọnwa iji hụ na nrụgide taya ahụ ziri ezi.
Previous: Otu esi amata mmejọ ụgbọ ala site na mkpọtụ ụgbọ ala
Ọzọ: Anyi na anwu ndi SunsoUL LIVE na Aug 15th
Copyright © 2020 NINGBO SUNSOUL AUTO ACCESSORIES CO., LTD